Maxkamada Yurub oo ganaaxday Denmark | Somaliska
Af-Soomaali / Denmark / Socdaalka
Maxkamada Yurub oo ganaaxday Denmark
Maxkamada Xuquuqda Aadanaha ee Midowga Yurub ayaa cambaareyn iyo ganaax dusha uga tuurtay dalka Denmarka ka dib markii ay sharci u diideen gabar Soomaaliyeed oo wadankooda ku kortay. Sheekada gabadhaan ayaa bilaabatay 2003 ka markii waalidkeed u kexeeyeen Kenya iyadoo 15 sano jir halkaasoo ay ku nooleyd ilaa 2005. Iyadoo waalidkeed ku noolaayeen Denmark.
Markii ay isku dayday in ay ku soo laabato Denmark ayaa loo sheegay in sharcigii ka dhacay oo aysan xaq u lahayn in ay dib ugu soo laabato dalkaas. Waxay codsiyo u dirtay dhamaan waaxyaha qaabilsan arimaha socdaalka ilaa maxkaamada ugu sareysa Denmark iyagoo dhamaantood diidmo siisay. Gabadhaan ayaa si qarsoodi ah ku soo gashay dalka Denmark iyadoo halkaa dacwadeedii ka sii wadatay. Ugu dambeyntii 2010 ayaa dowlada Denmark waxay ku amartay gabadhaan in ay wadanka isaga baxdo oo dibada magangalyo cusub ka soo dalbato.
Gabadhaan ayaa kiiskeeda u gudbisay maxkamada xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub iyadoo maxkamadu arintaas go’aan ka soo saartay.
Maxkamada ayaa go’aankeeda ku sheegtay in Denmark ay jabisay sharciga midowga Yurub ee faraya xaqa caruurta ay u leeyihiin in ay waalidkood la noolaadaan, isla markaana gabadhaan ay ku kortay Denmark. Maxkamada ayaa ganaaxday Denmark in ay gabadhaan siiso lacag gaareysa 21,000 Euro mudo 3 bilood gudaheed ah.
Denmark ayaa ku doodeysa in waalidka gabadhaan ay yihiin kuwa gaarey go’aanka ay gabadhooda kaga saareen wadanka isla markaana aysan la soo xiriirin Laanta Socdaalka.
Nin isagu is afduubay oo la soo xiray
Codsi loo diray siyaasiyiinta Sweden
wan idin salamay somaliska.com waxan idin leyahay waligin jira wa sax ine u dodoo xaqeda gabadhan wa cunsiryin darmak inta muslin ah ilahery haka bad badiyo
June 25, 2011 at 11:23
midawga yurub waxanleyahay jira oojoga denmark wa wadan ad iyo ad cunsuri uhaleyayay talo ahan waxanba oranlaha inla isaga guuro meel cunsuri galay fa iidomalahnba
June 25, 2011 at 12:08
wad salamatihin walaalaha somaliska gabadhan aniga aya garanayo markii hore waxa keexayay hooyadii shashay markay isqabten gabadha iyo hooyada oo gabadha waxa losheegay in ey solaban doonto ee soeegto ayeeydii dhashay aabaha gabadha kadibna saas ayaa basaboorkeda lagu kasalay waxayna sogashay sweden kadibna sas ayay ugu labatay meshii eyka timi markii hore
June 25, 2011 at 14:52
Waa wax lagu farxo natiijadda Maxkamadda Midowga Yurub ay gabadha Soomaaliyeed ka qaadatay.. Anagan Soomaalida ah ee naloo diiday in Reeraheena nalala mideeyona waa inaan Sweden ku dacweynaa Maxkamadda Xuquuqda Aadanaha ee Midowga yurub.
waa beelo in ay ganaxan hadiikale dad badan saas ugalayan cunsuri nimadooda
Jimcale a.s.c. Salantas kdib macqul matahay in ey maxkamadan kaqabato arimaha swden mahadsanid
June 25, 2011 at 22:05
Haa bro, maxkamadaan waxay awood ku leedahay guud ahaan midowga Yurub. Waa laga yaabaa in aysan ku qasbi karin dowlada Sweden in ay wax ka badasho arimaha mideynta reeraha balse cadaadis ayay saari kartaa ama ganaax.
June 27, 2011 at 03:04
sxb qoftaan lacagta aan ka dadsadee facebook geeda isoo radiya, europ waan ku daleeeee lol
Maxamed Yare says:
July 5, 2011 at 23:51
21,000kun dawlada dhan maa la ganaaxay what kind of ganaax is that waa ruwaayad hadey ka daacad tahay may malaayiin ku ganaaxaan wadan 21000 waxey ula mid tahay adiga oo hal cent ama kumi waxa loo yaqaano lagu ganaaxay taasina caqli gal mahaan !